ဘယ်လောက်ကြာက Porn-သွေးဆောင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်မှထမြောက်ဖို့ယူကြမည်နည်း - Porn တွင်သင့်ဦးနှောက်
ညစ်ညမ်းသော ED ရောဂါခံစားနေရသောလူများထံမှရရှိသောနံပါတ်တစ်မေးခွန်းမှာကျွန်ုပ်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်မည်မျှကြာမည်နည်း။ သင်၏ erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်ရောက်ရှိရန်မည်မျှကြာမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မခန့်မှန်းနိုင်ပါ။ ယောက်ျားများသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများ၊ အပြာစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများကိုလုံးဝရပ်တန့်လိုက်သည့်အခါတိုးတက်မှုနှင့်အတူလိုက်ဖက်သူများအကြားတိုးတက်မှုမှာအံ့အားသင့်စရာဖြစ်သည်။ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုဖယ်ရှားခြင်းသို့မဟုတ်အကြီးအကျယ်လျှော့ချခြင်းသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောပြန်လည်ဆုတ်ခွာခြင်းနှင့်ပြန်လည်တိုတောင်းသောကာလကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုရောဂါလက္ခဏာများနှင့်တုံ့ပြန်မှုများကဖော်ပြသည်။ သူပြန်လည်နာလန်ထူလာသောအခါယောက်ျားတ ဦး ၏အကောင့်မှာဤတွင်ပါ။
ငါရက်ပေါင်း 90 နီးကပ်သည်နှင့်ငါ့အတွေးများကိုမျှဝေချင်တယ်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းရဲ့အဆုံးမှာအလင်းရောင်ရှိပေမယ့်လတစ်လကောင်းကောင်းရှိနိုင်တယ် flatline သင်အဲဒီမှာမရောက်မီ [libido] ။ ငါဖတ်ပြီးတဲ့အရာကနေ၊ သူတို့က ၇ ရက်သွားပြီးစူပါမင်းလိုခံစားရတယ်။ ထိုအခါကပဲသေပုံရသည်။ ရေတိုပြန်လည်စတင်တာကရေတိုအကျိုးကျေးဇူးတွေရစေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ (ဆိုလိုသည်မှာ ၇ ရက်ကြာ testosterone ဟော်မုန်းတိုးပွားလာခြင်း၊ ၎င်းသည်လာမည့်အရာများ၏အရသာဖြစ်သည်။
လအနည်းငယ်ကြာမှသာကျွန်ုပ်သည်ရေရှည်အကျိုးကျေးဇူးများကိုခံစားနိုင်ပြီဖြစ်သည်။ ရက် ၇၀ လောက်ကြာပြီးတဲ့နောက်မှာf… king time ကိုကျွန်တော်တော်တော်လေးခံစားခဲ့ရတယ်။ အကြှနျုပျ၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီ ငါ့စိတ်ဓာတ်ကျသွားပြီ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုကျန်းမာသန်စွမ်းသော၊ ဆန့်ကျင်ဘက်လိင်ရှင်၏ကျွန်မဟုတ်တော့ပါ။ မိန်းမတွေကိုနတ်ဘုရားမတွေအဖြစ်မမြင်တော့ဘူး။
ဗီဒီယို: porn-သွေးဆောင် erectile ကမောက်ကမဖြစ်မှု (PIED) မှဘယ်လောက်ကြာ recover သလော နောဧသည်ခဘုရားကျောင်းအားဖြင့်
ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်သည်ပုံမှန်မဟုတ် (ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်များကိုဆိုးရွားသည့်နေ့များနှင့်အပြန်အလှန်အားဖြင့်လိုက်နာသည်) ဖြစ်သော်လည်းဤနေရာတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည်။
ဆုတ်ခွာလက္ခဏာတွေနှင့်မတရားသော များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းပေါ်ပေါက်ပါတယ်။ သို့သော်အချို့သောယောက်ျားများသည်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ခန့်လျှင်မြန်စွာပြန်လည်လောင်ကျွမ်းမှုနှင့်ယုံကြည်မှုပြန်လည်ရရှိသည်ကိုသတိပြုမိကြသည်။ အောက်ကနံပါတ်3ကိုကြည့်ပါ။
လိင်စိတ်နဲ့စိုက်ထူ၏မရှိခြင်းပိုမိုမြင့်မားသော flaccidity ("ကျုံ့သို့မဟုတ်သက်မဲ့လိင်တံ"): မကြာခဏတပတ်တဦးတည်း၏အဆုံးဆီသို့စတင်ပေမယ့်အလွန်အမင်း variable ကိုဖြစ်စေနိုင်သည်။ ရက်သတ္တပတ် ၂-၈ ပတ်ကြာ ဆက်လက်၍ အသက် ၁ နှစ်အရွယ်နှင့်လိင်မှုကိစ္စဆိုးဆိုးဝါးဝါးအပေါ်မူတည်သည်။ သို့သော်၊ အချို့သောယောက်ျားများသည်ပိုမိုကြာမြင့်စွာထွက်ခွာကြပြီး၊
အခြားအချိန်များတွင်နံနက်စိုက်ထူခြင်း၊ libido နှင့်ရံဖန်ရံခါအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်း (“ ပြားနေသည့်ရက်များ” နှင့်အတူရှိနေဆဲ) ၏တဖြည်းဖြည်းပြန်လာခြင်း။ လူအပေါင်းတို့သည်အလိုအလျောက်စိုက်ထူတစ်ပြန်လာတွေ့ကြုံခံစားဘူး။
အူသိမ်အူလှုပ်ရှားမှုများအတွင်း“ သုတ်ရည်ယိုစိမ့်ခြင်း” စသည်။
ဒါကြောင့်တစ်ချိန်ကပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်လျှင်ပင်ကောင်းသောစိုက်ထူ၏ပြန်သွား, အစစ်အမှန်မိတ်ဖက်များအတွက်လိင်ကိစ္စအလိုဆန္ဒ, အလွန်ပျြောမှေ့စလိင်၏အစီရင်ခံစာ, အကြောင်းအရာကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်း။
အနည်းငယ်သောရှားပါးသောအပေါင်းအသင်းများသည်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အတွင်းအလွန်လျင်မြန်စွာပြန်လည်ကောင်းမွန်လာသည်။ သူတို့ကစွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်စပ်သော ဦး နှောက်အပြောင်းအလဲများကိုတီထွင်ခဲ့ပုံမရပေ။ ယောက်ျားလေးအချို့သည် ၄ ​​မှ ၆ ပတ်အတွင်းပြန်လည်နာလန်ထူလာသည်။ အင်တာနက်နှင့်အတူကြီးပြင်းလာခြင်းမရှိသောသက်ကြီးရွယ်အိုများယောက်ျားလေးအများစုသည် ၈ ပတ်မှ ၁၂ ပတ်အလိုတွင်ညစ်ညမ်းမှု၊ သို့သော်သူတို့သည်စိုက်ထူမှုများပြန်လာပြီးနောက်တိုးတက်မှုများကိုဆက်လက်တွေ့မြင်ကြလိမ့်မည်။
အနည်းငယ်ထက် ပို. 3-6 လအတွင်း ယူ. , သို့မဟုတ်ပိုရှည် Erectile ကျန်းမာရေးပြန်လည်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရန်။ မကြာသေးမှီကပြန်ဖွင့်အကောင့်တစ်ခုကိုညွှန်ပြ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ်စတင်ခဲ့သူကိုနုပျိုယောက်ျားတွေ အစောပိုင်းအသက်အရွယ်မှာ9လအတွင်းသို့မဟုတ်ကြာကြာယူနိုင်ပြီး, ကျန်းမာစိုက်ထူ၏ပြန်လာပြီးနောက်လကြာတိုးတက်မှုတွေ့ကြုံခံစားဆက်လက်ပါလိမ့်မယ်။
အဘယ်သူမျှမညစ်ညမ်း (နှင့်ဖြစ်ကောင်းမျှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်) နှင့်မည်သို့တသမတ်တည်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်
ခေတ်တဦးတည်း porn ကို အသုံးပြု. ဆန္ဒအလျောက်စတင်ခဲ့သည်။ အသက်အရွယ်နုပျိုသောညစ်ညမ်းများအတွက်ပိုမိုအားကောင်းဦးနှောက်ဝါယာကြိုးများနှင့်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်အဘို့အဆီးအတားမရှိလျှပ်စစ်ဝိုင်ယာကြိုးဆိုလိုသည်။ တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုနှင့်အတူစတင်ခဲ့လျှင်, လမ်းကြောင်းကအရမ်းနက်ရှိုင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အကယ်၍ သင်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကတည်းကစတင်ခဲ့လျှင် (သို့မဟုတ်လိင်မှုကိစ္စပြုခြင်းမတိုင်မီကညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခဲ့လျှင်) ၎င်းသည် ၃-၆ လအထိကြာနိုင်သည်။ or ရှည် မင်းပြန်ကောင်းအောင်လုပ်မယ် လူနာဖြစ်နှင့်ကြည့်ရှုပါ:
1) ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဦးနှောက် Highspeed အင်တာနက်က Porn (2013) တွေ့ဆုံ
2) အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (ED) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်;
3) Young က Porn အသုံးပြုသူများသူတို့ရဲ့ Mojo Recover ရန်ရှည်လျားတဲ့လိုအပ်;
4) ဂယ်ရီနှင့်ဂါ porn-related ED ကနေပြန်လည်နာလန်ထူဆွေးနွေးရန် (#9 ပြသ)
သင်တစ်ဦးမိတ်ဖက်ရှိပါကကဖြစ်စဉ်ကိုအရှိန်မြှင့်လိမ့်မည်။ တကယ့်လူ့ရန်သင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှု rewire ကူညီပေးသည်။
porn အသုံးပြုမှုအရှည်။ ရှည်ရှည်နာလန်ထူဆိုလိုပေမည်။
ဘယ်လိုမကြာခဏ porn တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အမြဲတမ်းသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါ။
(တစ်နေ့လျှင်တစ်ပတ်ကို) PMO အစည်းအဝေးများ၏ frequency
porn ထံမှ abstinence ၏ယခင်ကာလ။ abstinence ၏မကြာသေးမီကာလပိုမိုမြန်ဆန်ပြန်လည်နာလန်ထူကိုဆိုလိုသည်။
လက်ရှိတွင်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေများအတွက်အသုံးပြု porn ၏အမျိုးအစား။ ပိုမိုထိတ်လန်သို့မဟုတ်အသုံးပြုသူအဘို့ဖြစ်၏နှောင့်ယှက်ခြင်း, ပိုပြီးဦးနှောက်ကိုအဆင်ပြေအောင်သိရသည်။
အကယ်၍ သင်သည် porn-induced fetishes များကိုတီထွင်ခဲ့ပါက "vanilla" sex ကြောင့်နှိုးဆော်ရန်အချိန်များစွာကြာနိုင်သည်။
စွဲဖို့ဦးနှောက်၏ကနဦး sensitivity ကို (မျိုးရိုးဗီဇ, ငယ်စဉ်ကလေးဘဝစိတ်ဒဏ်ရာ) ။
တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းအမျိုးအစားကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ “ သေခြင်းချုပ်ကိုင်ခြင်း၊ ကျရောက်နေတဲ့အနေအထား အလုပ်?
သုတ်ရည်လွှတ်ခြင်းမရှိဘဲ Edging ကို restart နေစဉ်။ တကယ်ပဲမကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။
အဘယ်အရာကို porn နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျကော? ကခိုင်မာစေအဖြစ်တစ်ဦးကမကောင်းတဲ့စိတ်ကူး, sensitized စွဲလမ်းကြောင်း။ ဒါပေမယ့်အစစ်အမှန်သဘောတူညီချက်နှင့် ပတ်သက်. ကူးယဉျအထူးသဖြင့်အနည်းငယ်သာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူယောက်ျားတွေအဘို့, OK ကိုဖြစ်နိုင်သည်။
reboot လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေစဉ်မှာလိင်ဆက်ဆံတာကော။ ဖြစ်ကောင်းကောင်းတစ် ဦး အရာ။ သငျသညျလှည့်စားသို့မဟုတ်လိင်ဆက်ဆံမှုရှိပါကနှင့် orgasm ကိုရှောင်ကြဉ်ပါကအဆင်ပြေမည်၊ အကျိုးရှိနိုင်သည်။ သိပ်မကြာခင်မှာဖြစ်မယ်ဆိုရင်လက်တွဲဖော်တစ်ယောက်နဲ့အော်ဂဇင်ကသင့်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်နိုင်တယ်၊ Porn-ED ပြုသော ED သည်သင့် ဦး နှောက်တွင်လုံလောက်ပြီဟုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။ သင့်တွင် ED ရှိပါက porn fantasy သို့မဟုတ်အခြားနည်းများဖြင့်စိုက်ထူခြင်းကိုအတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်သင်၏ပြန်လည်နာလန်ထူမှုအတွက်တန်ပြန်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိဟုထင်ရသည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, သင်သည်ဟန်ချက်ညီပြန်, ဒါပေမယ့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူအများကြီးကြုံတွေ့မဟုတ်ပါလျှင်, မိတ်ဖက်တစ် ဦး နှင့်အတူလိင်သင့်ကိုပြသပါလိမ့်မယ် များမှာတကယ်တော့နောက်ကျောပုံမှန်။ ဥပမာအားဖြင့်ယောက်ျားတစ်ယောက်ပြောတာက
အလိုအလျောက်စိုက်ထူနိမိတ်လက္ခဏာဖြစ်လိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့ကတကယ့်နိမိတ်လက္ခဏာကိုဖြစ်မသေချာဘူး။ အရာရာအဆင်ပြေချောမွေ့မည်ဟုခံစားရရန်အပိုဆုကြေးတစ်ခုနှင့်အတူလမ်းလျှောက်ရန်မလိုအပ်ပါ။ ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဥပမာ၊ ကျွန်ုပ်ရည်းစားကိုရက်အနည်းငယ်မျှမတွေ့ပါ။ အဲဒီအချိန်အတောအတွင်းငါအလိုအလျောက်စိုက်ထူခြင်းမရှိ။ ငါ့ရဲ့အရင်ပြtroublနာတွေကြောင့်ငါစိတ်ပူမိတယ်၊ ငါထပ်ပြီးဆုံးရှုံးနေတာလား။ ဒါပေမယ့်သူမကိုတွေ့တော့အရာအားလုံးကအဆင်ပြေတယ်။ သူမရဲ့ထိတွေ့မှုနဲ့အနံ့ကကျွန်တော့်ကိုလှည့်စေပြီးလိင်တံကအလုပ်လုပ်တယ်။ သင့်ရဲ့ ဦး နှောက်ဟာမျှတမှုမရှိရင်တောင်မှသင့်မှာအမြဲတမ်းအလိုမလိုက်ရင်တောင်အမှုအရာတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေဖြင့်၊ လိင်ဆိုင်ရာလိင်မှုဆိုင်ရာအဖြေများအားလေ့ကျင့်သင်ကြားသောလူငယ်များသည်စစ်မှန်သောမိတ်ဖက်များနှင့်ပြန်လည်ဆက်သွယ်လိုသည့်အချိန်ရောက်လာသည်။ မရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလျှင်, လူမှုရေးအရ။ သင်အခြားသူများနှင့်အဆက်အသွယ်လိုအပ်သည်။ မိမိကိုယ်ကိုလှုံ့ဆော်ရန်သင်စိတ်ကူးယဉ်ရန်လိုသည်။ ကြည့်ပါ - အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းအပေါ် Started နှင့်ငါ့ reboot (ED) ရှည်လျားလွန်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ကံမကောင်းစွာငါတို့သည်သင်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုပေါင်းစပ်ဖို့လိုအပ်သောအရာကိုအမှတ်မှာသင်ပြောပြလို့မရပါဘူး။
ဒီချည်မှ ရုံယနေ့စတင်ခဲ့သည်။ ဘယ်လောက်ကြာပျှမ်းမျှပေါ်မှာအပြည့်အဝ function ကိုပြန်သွားဖို့ကိုယူသနည်း?
၁။ လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်စေသောရုပ်ပုံများကိုဖယ်ရှားခြင်း၊ ပုံမှန်အားဖြင့် Facebook နှင့် OkCupid ကဲ့သို့ကောင်းသောအရာများပင်။ အခုသူတို့နဲ့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်၊ ​​ဒါပေမယ့်အဲဒါကငါ့ ဦး နှောက်ကအရာဝတ္ထုတွေကိုခွဲထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးစခဲ့တယ်
2 ။ အမျိုးသမီးတစ်ဦးနှင့်အတူ Rewiring ။ သငျသညျအဖြစ်မကြာခဏတတ်နိုင်သမျှအတူပုခက်လွှဲနိုင်ပါတယ်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာပါ။ ဤသည်အလွန်တရာသင်သည်အရှိန်မြှင့်မည်ဖြစ်သည်။
3 ။ အဘယ်သူမျှမအော်ဂဇင် Going ။ ငါအော်ဂဇင်မပါဘဲ 98 ရက်ပေါင်းသွားသောအခါ rewiring နေချိန်မှာငါအရှိဆုံးတိုးတက်မှုဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ငါ 100% စိုက်ထူခဲ့တစ်ချိန်ကငါ orgasm ကဆက်ပြောသည်
၄။ လိင်အပေါ်ထားရှိသောသင်၏သဘောထားကိုပြောင်းလဲပါ။ မင်းက“ ငါလိုမိန်းမတစ်ယောက်ကိုငါမနှစ်သက်ဘူး” လို့ပြောပေမယ့်လုံးဝမှားပါတယ် မိန်းမများကိုသင်၏ပါးစပ်နှင့်လက်များကိုနှစ်သက်စေရန်သင်လုပ်နိုင်သည်၊ များသောအားဖြင့်အလုပ်လုပ်သောလိင်တံဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည်ထက်များပေသည်။
ဒီမှာရှိနေတဲ့ယောက်ျားတော်တော်များများက“ ကြိုးစားအားထုတ်ခြင်း၊ မအောင်မြင်ခြင်း၊ waaaaa” ကိုတင်ကြသည်။ မင်းကလိင်ဆက်ဆံနိုင်တယ်။ သင်ခဏကြာလျှင်သင်၏ ED ပျောက်ကွယ်သွားသင့်သည်။
ဒီမှာခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာပုံမှန်အားဖြင့် rewiring အများကြီးမလုပ်ကြပါဘူး။
အဲဒါကိုကပ်လိုက်ပါ။ နောက်တဖန်လိင်ဆက်ဆံခွင့်ရခြင်းသည်အလွန်ပင် ၀ မ်းသာပါသည်။ သင့်အတွက်လည်းပြန်လာပါလိမ့်မယ်🙂
လူငယ်များအနေဖြင့်တကယ့်ပုဂ္ဂိုလ်များအား၎င်းတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုကိုပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးကြောင်းဤအောင်မြင်သော rebooter ကပြောကြားခဲ့သည်။ Rewiring ငါ၏အ reboot တက်စခေဲ့!
အားလုံးမင်္ဂလာပါ! ဒါနဲ့ငါ ၁၀၀+ ရက်မှာ PMO မရှိဘူး၊ မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အချိန်ဖြုန်းနေတယ်။
အားလုံးနီးပါးငါအပြားပြားထဲရောက်နေသည်။ ကျွန်ုပ်၏နံနက်သစ်တောများသည်တဖြည်းဖြည်းပိုမိုခက်လာပြီးအကြိမ်ရေများလာသည်နှင့်အမျှ libido အနည်းငယ်နှင့်အလိုအလျောက်စိုက်ထူမှုလုံးဝမရှိသလောက်ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၇ ရက်ခန့်ကကျွန်ုပ်သည်တစ်စုံတစ်ခုကိုပြန်လည်နိုးထလာခဲ့ပုံရသည့်မိန်းကလေးတစ် ဦး နှင့်အေးအေးဆေးဆေးအနားယူရသောညတစ်ညနေခဲ့ရသည်။ ကျွန်မတို့အနမ်းတွေတီးထားတာတွေ၊ ထိတွေ့မှုတချို့ကိုအဝတ်အစားတွေနဲ့တို့လိုက်ကြတယ်။ ဒါဟာအံ့ feeling စရာကောင်းတဲ့ခံစားမှုတစ်ခုပါ။ အဲဒီအချိန်ကတည်းကကျွန်မမှာလိင်စိတ်တိုးပွားလာတာနဲ့အမျိုးသမီးတွေအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအမြင်တွေမြင့်တက်လာတယ်။
ကျွန်ုပ်သည်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းမရှိသေးပါ - ကျွန်ုပ်၏စိုက်ထူမှုများသည်မလုံလောက်သေးပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အောင်မြင်သောလိင်ဆက်ဆံမှုမရရှိနိုင်ကြောင်းသေချာသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်စာရေးခြင်းကြောင့်သာဖြစ်သောကြောင့် တကယ်တကယ်တကယ် , နမ်း cuddling နှင့် orgasm မပါဘဲရငျးနှီးဖြစ်ခြင်းလိခ်အားဖြင့်သင့် reboot အရှိန်အဟုန်မြှင့်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစား
ယောက်ျားများသည် ED ကိုညစ်ညမ်းသောအကျင့်ဖြင့်ဖြစ်ပေါ်စေကြောင်းပထမဆုံးအကြိမ်လေ့လာသောအခါ၎င်းတို့သည် porn, masturbation နှင့် orgasm အားလုံးကိုရပ်တန့်ရန်အလွန်စိတ်အားထက်သန်ကြသည်။ အချို့သည်အောင်မြင်သော်လည်းအချို့သည်ပြန်လည်နာလန်ထူသို့မဟုတ်ရံဖန်ရံခါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသို့မဟုတ်တွဲဖက်ခြင်းနှင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းတို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ပြန်ဖွင့်ခြင်းမပြုမီစိန်ခေါ်မှုတစ်ခုမှာ“ က” တွင်ကန်နိုင်သည့်အရာဖြစ်သည်။Chaser အကျိုးသက်ရောက်မှု"နောက်ရက်စုံတွဲတစ်တွဲကျော်။ ဤအချက်ကိုသိရှိထားခြင်းကသင့်အား“ ဘယ်နေရာမှာမှ” ပြင်းထန်သောတိုက်တွန်းမှုများကိုခံရသောအခါသင့်အားမူးယစ်ဆေးဝါးသက်သာစေနိုင်သည်။
သင်ဘာပဲလုပ်လုပ်သင့်ရဲ့စိုက်ထူမှုပြproblemsနာကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ညစ်ညမ်းမှုပဲဆိုတာသတိပြုပါ။ ညစ်ညမ်းမှုကိုရှောင်ခြင်းမှာသင်၏ထိပ်တန်း ဦး စားပေးဖြစ်သည်။ သငျသညျသုတ်ရည်လွှတ်မှုမှတစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေရန်ထိန်းချုပ်မှုတိုက်တွန်းမှုရှိပါက porn မပါဘဲထိုသို့ပြုပါ။ သင်သည် porn မပါဘဲတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါက၎င်းသည်လိင်ဆိုင်ရာဆန္ဒအမှန်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားသင့်ရဲ့တွန်းအားဟာအတွေးဒါမှမဟုတ်အမြင်အာရုံတစ်ခုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စွဲလမ်းမှုသာဖြစ်တယ်။
အားလုံးသောအစီရင်ခံချက်များအရသူတို့၏ erectile ကျန်းမာရေးကိုပြန်လည်ရရှိသောအမျိုးသားများသည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုလုံးဝရှောင်ကြဉ်ကြသည်။ သင်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေလေလေကြာလေကြာလေလေဖြစ်သည်။ သို့သော်သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများအားလုံးသည်တဖြည်းဖြည်းတိုးပွားလာသည်။ ဤတွင်ယောက်ျားတစ်ယောက်သည်ပြန်လည်နာလန်ထူရန်သူ၏ကြိုးပမ်းမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခဲ့သည်။
ငါ ၆ ပတ်လောက်သွားပြီးပြန်လည်ပတ်မှုအနည်းငယ်ရှိခဲ့တယ်။ (ပျော့ပျောင်းတာကိုစစ်ဆေးဖို့အတွက်စမ်းသပ်ဖို့ soft-core ကိုကြည့်ခြင်း - အကြံပြုသည်မဟုတ်) တစ်ကြိမ် ၄ ရက်သို့မဟုတ်တစ်ကြိမ်။ ငါနောက်ဆုံးတွင် celibacy သို့ပြန်သွားသောအခါငါသုညကနေစတင်ခဲ့ဘူးငါရက်သတ္တပတ်သုံးခုကနေစတင်ခဲ့သည်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါကစလုပ်တုန်းကတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာကနေမခဲယဉ်းခဲ့လို့ပါ။ ဒါပေမယ့်ပြန်လည်ကျင့်သုံးပြီးမှငါကအစပြည်နယ်သို့မပြန်ခဲ့ပါဘူး
သင်သည်နောက်တစ်ခါလိင်ဆက်ဆံလျှင်၊ လိင်ဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်ကိုအာရုံမစိုက်ဘဲစိတ်အသစ်တစ်ခုဖြင့်ချဉ်းကပ်ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ အတိတ်ကအောင်မြင်မှုများကြောင့်စိုးရိမ်ခြင်းမှာဖြစ်လေ့ဖြစ်ထရှိပြီးစိုးရိမ်စိတ်ကိုကျော်လွှားရန်ကြိုးပမ်းမှုအနည်းငယ်သာဖြစ်နိုင်သည်။ ED, reboot, and sex sex သောအခြားအမျိုးသားများ၏အကြံဥာဏ်များ။
ကျွန်တော့်ဇနီးနဲ့“ အဆက်အသွယ်လုပ်” နေတဲ့ ၃ ကြိမ်ကကျွန်တော့်ကိုပြန်လည်စတင်ပြီးကတည်းကကျွန်တော့်မှာလိင်ဆက်ဆံဖို့မျှော်လင့်ချက်မရှိဘူး။ တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ခန္ဓာကိုယ်ပျော်မွေ့ခြင်း၊ နမ်းခြင်း၊ နမ်းခြင်းစတာတွေကိုပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တစ်ခုကတော့သင် ... WHAM !!! အားလုံးအရမ်းစိတ်အေးလက်အေးဖြစ်ခဲ့သည်။
ငါဆယ်ကျော်သက်နှောင်းပိုင်းမှာငါပြaနာရှိခဲ့သိတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်မအသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းကလိင်ဆက်ဆံမှုအောင်မြင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုအနာပျောက်အောင်မစဉ်းစားခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါစွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုခံစားခဲ့ရပြီး ၁၀ ထဲက ၉ ဆဟာမစွမ်းဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်ယခုငါစဉ်းစားမိသည်မှာ ၄ ရက်ဆက်တိုက်လိင်ဆက်ဆံခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်ကိုအဆင်ပြေစေသည်ဟုကျွန်ုပ်အားမစည်းရုံးနိုင်လျှင်၊ ဘာဖြစ်မည်နည်း။ ငါအတိတ်ကာလကအများကြီးမျှော်လင့်ထားခဲ့ကြပေလိမ့်မည်။ ငါဘယ်လောက်ပဲအလေးအနက်ထားနေပါစေငါဟာစက္ကန့်ပိုင်းမှာသတိထားမိဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်သင့်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ ပြီးတော့လှပတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ကိုငါကြည့်တိုင်းအချစ်ပိုရမယ်လို့မျှော်လင့်ခဲ့တယ်။ အခုငါမျှော်လင့်တာကငါကြိုက်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် (ဆိုလိုတာကကျွန်တော့်ဇနီး) ရှေ့မှာအေးအေးဆေးဆေးနေမယ်ဆိုရင်နောက်ဆုံးမှာသူဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်မှုပေါင်းစပ်ပြီးမျှော်လင့်ထားတာအနည်းငယ်ပြောင်းလဲမှုပါ။ ငါကဒီ site အတွက်မဟုတ်ခဲ့လျှင်ငါတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုစွန့်လွှတ်ဖို့ရက်ပေါင်း 20 အဘို့စိတ်ကူးဘယ်တော့မှမယ်လို့ပြောပါလိမ့်မယ်။ ဒီ site က connection aspect ကအရမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာကိုဒီ site ကလက်ခံတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာစိုးရိမ်ပူပန်မှုသည်တကယ့်ကိုခက်ခဲသောအရာဖြစ်သည်။ သင်အမျိုးသမီးတစ် ဦး နှင့်အိပ်နေစဉ်နှင့်သင်ကိုယ်တိုင်စလေ့လာပါကစိုက်ထူမှုတစ်ခုမဖြစ်နိုင်ပါ။ ငါသိထားတာကလိင်ဆက်ဆံမှုကိုစိတ် ၀ င်စားတာကစွမ်းဆောင်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစိုးရိမ်တာပါ။ သော့ကစိုက်ထူခြင်းအကြောင်းကို iota တ ဦး တည်းစိတ်မပူပါနဲ့ထဲသို့ဝင်ရန်ဖြစ်သည်။ ပြောတာကလုပ်တာထက်ပိုလွယ်တယ်၊ ဒါပေမဲ့အဲဒါကလူများစွာရင်ဆိုင်ရတဲ့စိန်ခေါ်ချက်ပဲ။ ငါကရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်, ငါကမှတဆင့်တယ်အံ့သြမိပါတယ်။
တစ်နည်းအားဖြင့်ဆိုသော် porn-style sex ကိုမေ့ပါ။ အပန်းဖြေခြင်းသည်စိုက်ထူခြင်းကိုအမှန်တကယ်အားပေးသည်။ တကယ်တော့, oxytocin ("cuddle hormone") စိုက်ထူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်, သင်ချစ်ခင်, ရက်ရက်ရောရောထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာသင် oxytocin ထုတ်လုပ်ရန် ပုံကိုသွား
ပြန်လည်နာလန်ထူအကောင့်ကိုလည်းတွေ့မြင် ဒီမှာ နှင့် ဒီမှာနှင့် ကျွန်ုပ်ပုံမှန်ပြန်ရောက်လာသောအခါမည်သို့သိနိုင်သနည်း။
အကြှနျုပျ၏နောက်ပြန်မဟာဗျူဟာ - အသုံးပြုသူဇာတ်လမ်း